I-Spotify ngokuqinisekileyo iza kuza kwiXbox One | Iindaba zeGajethi
I-Spotify ngaphandle kwamathandabuzo yinkokeli ekusasazeni umxholo womculo, kangangokuba kutshanje baqinisekisile ukuba bafikelele kubasebenzisi abahlawulayo abazizigidi ezingama-60, amanani amnandi avumela ukuba bashiye ngokusisigxina kwimali eyayinikwa yiApple Music ngaphandle kokugqibela besonwabela inani elipheleleyo labasebenzisi, kuba iswele ingxelo yasimahla.
Nangona kunjalo, iMicrosoft ngesizathu esithile esingayaziyo, ayikhange ibonelele ngeSpotify kuluhlu lwayo lwemidlalo nangona i-PlayStation 4 (ukhuphiswano) yayinesicelo seSpotify ukusukela oko yaqalwa. Ukulinda kugqityiwe IMicrosoft iqinisekisile nje ukuba iSpotify izakuza kungekudala kwivenkile yesicelo sayo, Iindaba ezimnandi.
Kumfanekiso ongezantsi sinokubona izikrini zokuqala zomsebenzisi eziya kuboniswa nguSpotify kwiXbox Inye, ikhonsoli yenkampani yaseRedmond iyakwamkela umculo ngaphandle kwemida, kwaye yenye yeenkcukacha ezazisilela, ngakumbi xa kuthathelwa ingqalelo unxibelelwano lwayo Windows 10, kwakunzima ukuqonda ukuba isicelo sezi mpawu asifumaneki, kutheni Sikhohlise. Ngoku uyonwabele i-Xbox One yakho njengeziko losasazo lasekhaya lenza okungakumbi.
Khange banike owona mhla, kodwa babone kufanelekile ukuba baqiniseke ukuba iyakuba yile veki izayo, enokuthi ihambelane nohlobo olutsha lwenkqubo yokusebenza ye-PlayStation 4 esele ikwi-beta. Kucacile ukuba ukufika kolu hlobo lwesicelo kusivumela ukuba sifumane ukusebenza okungakumbi kwiingcebiso zethu, ngendlela efanayo neMovistar + neNetflix zikwakhona nakwezinye iiplatifomu. Siza kujonga ukukhutshwa kwayo kokugqibela ukuze ungaphoswa naziphi na iindaba zekhonkco likaMicrosoft kunye nohlaziyo ngokubanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Spotify ngokuqinisekileyo iza kwiXbox One